I-San Jose, CA • Ukuhlikihlizwa komzimba ne-NuRu Massage
Ungadinwa eSan Jose. Ukubhuka massage yakho inkanuko namuhla.
ISan Jose ngokusemthethweni iDolobha laseSan José, lingesinye sezikhungo sezomnotho, amasiko nezombusazwe eSilicon Valley, [ukucaphuna okudingekayo] nedolobha elikhulu kunawo wonke eNyakatho California (kokubili ngabantu nendawo). Ngabantu abalinganiselwa ku-2018 be-1,030,119, kungumuzi wesithathu onabantu abaningi eCalifornia (ngemuva kweLos Angeles neSan Diego) kanye neleshumi elinabantu abaningi e-United States. Ungabi nesithukuthezi San Jose. Bhuka i- ukubhucungwa inkanuko.